Sei Train igumburwe Kunopfuura Road igumburwe | Save A Train
musha > Travel Europe > Sei Train igumburwe Kunopfuura Road igumburwe
Kana tichironga zororo kuti mhuri, vaviri kana boka shamwari, zviri nyore kuti munhu wose anobvumirana. Chimwe chinhu ichava nyore kubvumirana, zvisinei, ndechokuti kurenda motokari kana kuenda nechitima. Chikonzero chitima igumburwe kunopfuura mugwagwa igumburwe.
Hapana ane kutyaira
Kana kutora road rwendo, munhu nguva dzose anofanira kuva mutyairi. Izvi zvinoreva kanenge mumwe munhu ane kusvika pa nerimwe gumbo kurutivi kuenda vaneta. Wedzera kunounzwa wekushandisa uye mukana vopedzisira varasika, uye iwe uchava Mugshot kwako chitima matikiti chero zuva ikozvino, saka verenga sei chitima igumburwe ndiyo nzira kufamba.
Comfort uye maonero
Kana iwe nokusingaperi akaenda mumwe youduku mugwagwa rwendo, uchaziva pamusoro kurwa kuti hwindo chigaro, sezvo hapana anoda squashed pakati kuseri chigaro. On chitima igumburwe tasva, zvigaro zvose vanoitirwawo hwomutambarakede uye vane zvakanaka maonero. Zvigaro pamusoro itsva Trenitalia nezvitima vari kunyanya kusununguka, saka iva nechokwadi kuti bhuku rwendo pamusoro Frecciarossa soro-nokukurumidza chitima.
Yakabatanidzwa kuZurich nezvitima
Lucerne kuenda kuZurich nezvitima
Bern kuZurich nezvitima
Geneva kuenda kuZurich nezvitima
Train igumburwe uye Muchakavata muchitima
In motokari, chete vatakurwi anogona kurara uye kunyange panguva iyoyo, hazvisi hwomutambarakede pamubhedha. Evening nezvitima ndivo akangwara nzira wokusvika yako inotevera kuenda dzitsanye uyewo kuchengetedza pamusoro pokugara nokuti usiku.
London kuenda kuBrussels nezvitima
Brussels kuCologne nezvitima
Cologne kuenda kuVienna nezvitima
Cologne kuenda Innsbruck nezvitima
Parking Vs Train igumburwe
Mumugwagwa rwendo, unofanira kuwana nzvimbo kupaka motokari yako zvakanaka usiku hwese. Chii chakaoma zvazvo, ari kuwana nzvimbo kupaka mumaguta uye kunyanya panguva nzvimbo nzvimbo yakafanana yeColosseum mu Rome kana Duomo kuti Florence muna Florence. Sezvo nzvimbo iri shoma kumativi nzvimbo idzi, kupaka kunodyira shoma zvakare.
Berlin kuenda kuAmsterdam nezvitima
Road kufamba zviri nomukurumbira wayo yakakwirira kabhoni choutsi, uye matochi vakavhiyiwa motokari zvakaoma uye anodhura kuhaya. Luckily – pane nani nzira. chitima igumburwe – kunyanya pamusoro kuvatsva nezvitima – vane zvakawanda repasi kukanganisa mai pasi, saka unogona kunakirwa yako zororo mhaka-vakasununguka.
Akagadzirira bhuku chitima wako igumburwe ushingi? kushanya Save A Train uye kuwana yakachipa pashiri chitima matikiti.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwhy-train-tripping-is-better-than-road-tripping%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
longtrainjourneys rwendo nenzira chitima rwendo